सुनवल नगरपालिकामा पहिलो सुविधा सम्पन्न प्रसूति गृह सञ्चालनमा | Hamro Doctor News
आईतवार, १ आषाढ़ २०७६ /
सुनवल नगरपालिकामा पहिलो सुविधा सम्पन्न प्रसूति गृह सञ्चालनमा
By रमेश भुसाल
पश्चिम नवलपरासी, २५ असोज । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले नगरमै पहिलो सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह स्थापना गरेको छ ।
नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगर समेत रहेको नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा सुनवल वडा नं. १ को वडा कार्यालय रहेको भवनमा प्रसुति गृह स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । सुनवल नगरमा सुरक्षित प्रसुति गृह नहुँदा नगरबासी सदरमुकाम परासी सहित बुटवल, भैरहवा तथा भरतपुरसम्म जान बाध्य थिए ।
नगरपालिकाले २० लाख पचास हजारको लगानीमा दशजना कर्मचारी सहित प्रसुति गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो । तालिम प्राप्त स्टाफ नर्सबाट सामान्य प्रसुति सेवा प्रदान गरिनुका साथै नियमित सुत्केरी जाँच, आईरन चक्की वितरण लगायतका सेवाहरु पनि प्रदान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रसुति गृहमा २४ सै घण्टा सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाईएको सुनवल नगर प्रमुख भीम बहादुर थापाले बताए । नगरका १३ वटै वडाका सेवाग्राहीलाई सेवा पुराउने गरी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था पनि गरिएको प्रमुख थापाले बताए । प्रसुति गृहको प्रदेश नं. ५ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले उद्घाटन गरे ।
मन्त्री चौधरीले जिल्लामै स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गर्ने गरी पहिलो प्रसुति गृह स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले यस कार्यले समृद्धिलाई संकेत गरेको दावी गरे । सडक, पुलपुलेसाको विकास स्वभाविक देखिने तर नागरिकको खुसीसँग समृद्धि जोडिने भएकोले नगरपालिकाले नजिकबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन थालेको कमद सराहानीय भएको उनले बताए ।
अहिले प्रसुति गृहको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएकै स्थानमा १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पनि रहेको सुनवल नगरका उपप्रमुख दधिराम अर्यालले जानकारी दिए । जग्गा र बजेटको व्यवस्थापन गरी यसैवर्ष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया पनि थालिसकिएको उपप्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।
गुनासो दर्ता गराएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन टुंगियो, तत्काल सूचि सार्वजनिक नहुने
काठमाडौं, १ असार । स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको टुंगिएको छ । संघिय मामिला तथा...
जेष्ठ नागरिकहरुको घरमै पुगेर स्वास्थ्य परिक्षण गरिदैं
रुपन्देही, १ असार । गुल्मी जिल्लामा ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुको घरमै...
यस्तो अवस्थामा महिलाको पाठेघर फ्याँक्नुपर्छ
महिलामा धेरै देखिने स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघरसम्बन्धी समस्या पनि हो । धेरैजसो...
अस्पतालमाथिको आक्रमणप्रति अफिनको विरोध
काठमाडौं, १ असार । एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) ले ओम...
तीन वर्षदेखि रोकियो स्वास्थ्य कर कोषको रकम वितरण, १४ अर्ब उठ्दा ४० करोड विनियोजन
फाजिलमा परेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार खटाइने
मैले देखेको वीर अस्पताल, मैले भोगेको वीर अस्पताल
बिरामीको मृत्युपछि ओम अस्पतालमा तनाव, लापरवाहीको आरोप
३४ करोडको लगानीमा सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालको सुबिधा सम्पन्न भबन बन्ने
मेडिकल विद्यार्थीमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनः सबैभन्दा बढि डेन्टलमा
सरकार परिवर्तनले केसीका माग ओझेल पर्ने खतराः भट्टराई